12 Jun, 2014 - 13:06	 2014-06-12T13:31:46+00:00 2014-06-12T13:31:46+00:00 0 Views
NDIRI mudzimai ane makore 30 nevana 2 ndiri kudawo murume ane makore 31 kusvika 36. Andifarirawo ngaafone pa0782 110 598 kana kundibata paWhatsApp.
Makaita basa veKwayedza vose vaifona pa0714 729 955 chiregai henyu zvakaita.
Makadii henyu? Ndiri musikana ane makore 34 ndinotsvakawo mukomana ari pachokwadi anonamata ane makore 38 zvichidzika. Nhare yangu 0714 363 552.
Ndiri murume ane makore 38 ndinoda mukadzi wekuroora ane makore 28 – 34. Ndibatei paWhatsApp kana pa0773 141 679.
Vachiri kufona pa0773 339 080 chiregerai zvangu zvakaita ndave naye musikana wandaida.
Ndinotsvaga mukadzi anoda imba ane makore 20-24 kana ane mwana 1, ari HIV negative. Ini ndine makore 27 nemwana 1, anoda anondibata pa0779 074 138.
Ndiri mukomana ane makore 30 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 26 zvichidzika ari pachokwadi asi matsotsi nevakadzi vevanhu kwete. Ndibatei pa0775 300 010, macall me back nekubhipa kwete.
Makadii henyu? Ndiri musikana ane makore 34 ndinotsvakawo mukomana ari pachokwadi anonamata ane makore 38 zvichidzika. Nhare dzangu 0714 363 552.
Ndinonzi Allan Moyo, ndiri mukomana ane makore 24 uye ndiri kutsvaga musikana wekuroora ane makore ari pasi pe25 ari HIV positive. Vanoda ndibatei pa0783 370 680.
Ndiri mukadzi ane makore 42 ndiri kutsvaga murume ane makore 60, zvakawanda tozokurukura. Nhare dzangu 0783 213 286.
Ndiri mukadzi ane makore 41, ndiri HIV positive uye ndiri kuda murume ane makore 42 -50 ari pachokwadi. Nhamba dzangu 0774 075 345.
Ndiri mukomana ane makore 29 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana wekuwanana naye akazvibata ane makore ari pakati pe19-24. Ndinozvishandira anoda ngaandibate pa0783 252 609 asi macallbacks bodo. Mazviita.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23 wekuwanana naye. Ndinozvishandira uye ndinodawo anorevesa. Macall back kwete, anoda ngaandibate pa0779 609 892. Ndatenda.
Makadiiko? Ini ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi ari HIV negative anobvuma kunoongororwa ropa kubva pamakore 35 – 45. Anenge achida nhamba dzangu ndeidzo 0772 738 053.
Ndiri mukadzi ane makore 40 ndiri kutsvagawo murume wekuchengetana naye ane makore 46 zvichikwira ane vana vake, ane kumusha. Vadiki kwandiri nevarume vevanhu kwete. Anoda andibate pa0778 240 216.
Ndiri musikana ane makore makumi maviri nemana ndinoda jaya risati raziva musikana rine makore 25 – 32 anoshanda asi kwete mahwindi. Ndibatei pa0738 675 546.
Ndiri mudzimai ane makore 39 nevana vaviri ndiri positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 46 ari pachokwadi anoda zvekuvaka musha. Munondibata pa0733 698 755.
Ndine makore 28 ndinogara muHarare ndinotsvagawo musikana anoda kuroorwa, akagadzirira kunotorwa ropa ane makore ari pasi pe23 asina mwana. Nhamba dzangu 0773 201 429.
Munofara here hama nevadikanwi? Ndiri murume ane makore 36 nevana vaviri ndiri kudawo mudzimai anonamata positori anokwanisa kurima bindu. Anoda ndibate pa0773 169 103.
Makadini? Ndiri murume ane makore 45 ndinotsvaka mukadzi ane makore 34 zvichidzika ari pachokwadi anonamata. Anoda nezvangu ngaandibate pa0783 613 300.
Makadii? Ndiri murume ane makore 29 ndinotsvaga shamwarisikana ine makore ari pasi pe26. WhatsApp kana kufona pa0774 370 658.
Makadini zvenyu? Ndiri mukadzi ane makore 43 nevana 2 ndinodawo murume ari positive. Ndinoshanda kumayard, ndine passport uye ndinoda vakafirwa kunyanya. Vanoda hedzinoi nhamba dzangu 0715 348 486.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino ndakasangana nematsotsi, ndiri mukomana wemakore 26 ekuberekwa ndinodawo musikana wekuroora ane makore 19-24 ari pachokwadi. Nhare dzangu idzi 0775 568 085.
Ini ndiri mukadzi ane makore 31 nevana vaviri ndinotsvagawo murume ane makore 35-40 ari pachokwadi nehupenyu anoda kuroora, anonamata. Fonai panhamba idzi 0773 501 877.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handisati ndamuwana akavimbika. Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba ari HIV+ seni asi matsotsi mundisiyewo ndapota. Nhare dzangu 0737 809 454.
Ndiri Murume ane makore 40 ndiri HIV positive uye ndinoshanda. Handina mwana ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore 24 kusvika 35 akasimba. Asina basa raanoita zvake ngaandibate pa0773 447 507.
Ndiri mukadzi ane makore makumi maviri nematatu nemwana mumwe uye ndinodawo murume ane mwana 1 kana 2 ane rudo. Nhamba dzangu 0771 606 484.
Ndiri murume ane makore 37, ndiri negative uye ndinotsvagawo musikana ane makore asingapfuure 28 anoda zvekuvaka musha. Asina mwana ngaandibate pa0776 746 507.
Ndiri mukadzi ane makore 21, ndiri HIV positive uye ndinodawo murume ane makore 24 – 30 anoshanda chero basa, ari zvandiri. Ndibatei pa0739 562 795.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 35 zvichidzika. Ndibatei pa0738 556 681.
Ndiri murume ane makore 44 ndinotsvagawo mukadzi ari pachokwadi wekuroora. Nhare dzangu 0733 197 464, ndinogara kuBromley.
Ndiri musikana ane makore 26 ndinotsvaka mukomana wekuroorwa naye akavimbika asinganwi doro kana kuputa fodya. Vanoda zvekutamba uye vane vakadzi vavo kwete. Ndibatei pa0776 349 617.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 30 nemwana 1, ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 22 zvichidzika akashambidzikawo, anoteerera. Anondida anondibata pa0774 278 960.
Ndiri murume ane makore 42 nevana 3 ndinotsvagawo mukadzi anoda zvekuroorwa. Ini ndinoita basa remawoko, ndibatei pa0738 383 259.
Ndiri mukomana ane makore 31 ndinotsvagawo munhukadzi ane makore 25. Asina chirwere ngaafone panhamba idzi 0778 791 959.
Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvakawo mukadzi ane makore 25 kusvika 29 asina chirwere. Anoda nhamba dzangu idzo 0778 880 663. chero neWhatsApp inoita.
Ndiri murume ane makore 38 nemwana mumwe ndinoda mudzimai wekuroora ane makore 35 zvichidzika ane vana vaviri anoda kuroorwa. Ndiri pamunda uye ndiri HIV positive, anoda ngaavewo positive. Mudzimai wangu akashaya vanoda ngavandibate pa0778 076 338.
Ndiri mukomana wemakore 27 ndinoda musikana ane makore 19 – 28. Nhamba dzangu 0779 500 063.
Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana 2 ndiri kutsvaga murume ari kudawo mukadzi wekuroora asina mukadzi ane makore 45 zvichikwira akafirwa kana vakarambana. Ndiri HIV positive, vanoda ndibatei pa0716 345 411.
Makadii zvenyu? Ini ndiri musikana ane makore 25, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo mukomana anoda zvandiri kana kuti akafanana neni asingaonekwi kuti anacho ane makore 26 – 32. Ndinoda ari pachokwadi anoshanda, ini ndiri kuSouth Africa. Ndibatei kana paWhatsApp pa+27 787 919 936.
Ndiri murume ane makore 28 ndinoda mukadzi wokuroora ane makore 24 zvichidzika. Ndatenda hangu, nhare dzangu idzi +27 719 698 578.
Ndinoda musikana asina mwana ari pasi pemakore 30 ane zviito zvakanaka, zvinovaka. Ini ndine makore 37 ndinogara muHarare, nhamba dzangu 0776 746 507.
Ini ndiri mukomana ane makore 26 uye ndiri kutsvaga mudzimai ari pachokwadi ane makore 18 kusvika 28. Ndibatei pa0737 635 162.
Ndiri mukomana ane makore 33 ndinotsvagawo musikana ane makore 23 kusvika pa28. Nhamba dzangu 0738 737 171.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 28 ekuberekwa ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ari HIV negative akavimbika chero ane mwana wake. Nhare dzangu idzi 0774 149 741.
Zita rangu ndinonzi Thomas Mapepa, ndiri murume ane makore 27 nemwana 1 uye ndiri HIV negative. Ndinodawo mukadzi ane makore 24-26 ane mwana 1 kana asina. Ndibate pa0771 314 672.
Ndiri murume ane makore 35 uye ndinoda mukadzi ane vana akazvipira kuenda kunotorwa ropa. Ndibatei pa0716 607 920.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 30 ndinoda mukadzi kana musikana ane makore 25 zvichidzika. Ndinogara kuBelvedere muHarare, anoda ndibate pa0774 129 942.
Makadii veKwayedza? Ini ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 22 akanaka. Anoda nezvangu ngaandibate pa0782 006 963
Ndiri mukadzi ane makore 23 nevana vaviri ndiri kutsvaga murume ane makore 25-35 ari pachokwadi. Ndiri negative, vanoda ndibatei pa0783 243 568 .
Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana ane makore 18-21 ane rudo ari HIV negative, asinganwe doro nekuputa zvinodhakwa uye anochengeta zuva resabata (Mugovera). Ndibatei pa0779 000 440.
Makadii henyu? Ini ndiri mukomana ane makore 31 ndinotsvakawo musikana ane makore 20 kusvika pa30, ndine utachiona saka ndinotsvakawo anacho. Vanoda ndibatei pa0772 911 502.
Ndiri mukadzi ane makore 41, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari positive. Ndine vana 2, nhare dzangu 0716 461 408.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 46 uye ndiri HIV+, ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora ari HIV+ ari pamushonga akasimba. Ndinoda anonamata asinganwi doro kana kuputa fodya ane makore 46-55. Nhamba dzangu 0773 809 714, ndinogara muHarare.
Ndiri mukomana ane makore 27 ndine mwana mumwe chete ndiri kudawo mukadzi ari pachokwadi ane mwana mumwe chete ane makore 20 kusvika 25. Ndinoshanda nhare dzangu 0735 477 984.
Naizvozvo vose vanotumira maSMS avo kuchirongwa chino ngavave vanhu vari pachokwadi uye voshandisa nhamba dzenharembozha dzavo chaidzo. Hachipo kuparadza dzimba dzevanhu nokudaro avo vakawanikwa nevakaroora havakurudzirwe kunyorera kuchirongwa ichi.